မြန်မာစကားပုံ | Danya Wadi
By danyawadi July 26, 2017 Leaveacomment
မေး – နေ့ချွတ် ည၀တ်။ ဖြေ – တံခါး မင်းတုပ်။ မေး – အစိမ်းပေါ် အဖြူတင်၊ အဖန်လာမှ နီရောင်ဆင်။ ဖြေ – ကွမ်းယာ။ မေး – သူ့ကိုရိုက်တော့ ချာချာလည်၊ ကြိုးကိုဆွဲပြီး ငိုရှာတယ်။ ဖြေ – ကြေးစည်။ မေး – ကန်ထဲမှာရေ၊ ရေထဲမှာမြွေ၊ မြွေခေါင်းမှာရွှေ ဖြေ – မီးခွက်။ မေး – အညာကဆင်ဖြူ၊ အမွှေးထူ။ ဖြေ – ကြက်သွန်ဖြူ။ မေး – ဖူးခနဲထောင်၊ ဖောင်ခနဲလဲ၊ ရဲရဲနဲ့ တွဲလွဲဆွဲ။ ဖြေ – ငှက်ပြောဖူး။ မေး – သူ့အပင်နွဲ့ချောင်း မတက်ကောင်း၊ စားကောင်းပါရဲ့ […]
By danyawadi April 16, 2015 Leaveacomment
မြန်မာစာလုံးပေါင်း သတ်ပုံကျမ်း က ခ ဂ ဃ င စ ဆ ဇ ဈ ဉ ၊ ည ဋ ဌ ဍ ဎ ဏ တ ထ ဒ ဓ န ပ ဖ ဗ ဘ မ ယ ရ လ ဝ သ ဟ ဠ အ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx က ကာ ကား ကိ ကီ ကု ကူ ကူး ကေ ကဲ ကဲ့ ကော ကော့ ကော် ကံ ကံ့ ကို […]
By danyawadi February 23, 20143Comments
က ၁. “ကြက်ကန်း ဆန်အိုးတိုး” ၂. “ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီ” ၃. “ကိုယ်ကကျူး ကိုယ့်ဒူးတောင်မယုံရ” ၄. “ကိုယ်ထင် ကုတင်ရွှေနန်း” ၅. “ကျွဲပါး စောင်းတီး” ၆. “ကတုံးပေါ် ထိပ်ကွက်” ၇. “ကျေးဇူးရှိမှ ကျေးစွပ်” ၈. “ကြမ်းကျွံရင် နှုတ်ရ..စကားကျွံရင် နှုတ်မရ” ၉. “ကျန်းမာခြင်းသည်..လဘ်တစ်ပါး” ၁၀. “ကြက်တူရွေးကတော်တော်…မယ်ဘော်က..ကဲ” ၁၁. “ကျူပင်ခုတ်..ကျူငုတ်ပါမကျန်” ၁၂. ကျားဆရာကြောင်…ကြောင်ဆရာကြွက်” ၁၃. “ကြွက်မနိုင်..ကျီမီးနဲ့ရှို့” ၁၄. “ကျီစားသန်က..ရန်များ၏” ၁၅. “က ရိုး မက ဆန်း၍က နှပ်ပစ်ခံရ” ၁၆. “ကျားကြောက်လို့…ရှင်ကြီးကိုး..ရှင်ကြီး.ကျားထက်ဆိုး” ၁၇. “ကံကိုယုံတော့..စုံလုံးကန်း” ၁၈. “ကျော်တော့..လှေသူကြီး…ညားတော့..လှေထိုးသား” ၁၉. “ကံကိုယုံပြီး…ဆူးပုံနင်း” ၂၀. “ကျားရှေ့…မှောက်ရက်လဲ” ၂၁. […]
By danyawadi May 23, 2012 Leaveacomment
Browse အမယ်မှန်မှ ဘသား in အ | viewed 645 times and total 1 comment သားဖြစ်သူသည် မိမိအား သတိပေးထားသည့် ဖခင်ကိုပင် အဖေဟူ၍ အမှတ် ထားရစေကာမူ အမိဖြစ်သူက အမှန်တကယ်ထိုဖခင်နှင့် ပေါင်းသင်းမွေးဖွားထားခြင်း မှန်ပါမှပင် အဖ၏သားအစစ်အမှန်တော်စပ်လိမ့်မည်ဟု ဆိုလိုသည်။ အကြောင်းအရာ တစ်ခုသည် မှန်ကန်သည်ဟု ဆိုရစေကာမူ အကြောင်းအချက် အထောက်အထားအား ဖြင့် မှန်လောက်သည့် အချက်အလက်ရှိရဦးမည်ဖြစ်သည်။ သေချာမှုကို ညွှန်ပြသော အားဖြင့် သုံးနှုန်းသည်။… (ဆက်ဖတ်ရန်) အမဲရိုးနှယ် ဟင်းအိုးမှအားမနာ in အ | viewed 604 times and total 1 comment ဟင်းအိုးက ကောင်းမွန်သပ်ရပ်၍ အဖိုးတန်သော်လည်း […]
စကားပုံစုစုပေါင်း 457 ခုအားထည့်သွင်းထားပြီးဖြစ်သည်။ Home Browse က ခ ဂ င စ ဆ ည တ ထ ဒ ဓ န ပ ဖ ဗ ဘ မ ယ ရ လ ၀ သ ဟ အ About Suggest proverbs Feedback Get Involved က ကျားနေမြဲ ပိုနေမြဲကျားလည်း ကျားနေရာ၊ မောင်ပိုလည်း မောင်ပိုနေမြဲနေရာ အသီးသီး မူလအတိုင်းပင် ရှိသည်ဟု ဆိုလိုသည်။…Continue2Comments ကျားနေမြဲ ပိုနေမြဲ ကြာရှည်ဝါးမည့်သွား အရိုးကြည့်ရှောင် ကြက်ဥအရောင် တိမ်တောင်သဖွယ် […]